လူမီနီယမ် PCB - KingSong PCB နည်းပညာ, Ltd
ထိုမှတပါးလည်းဗို့အားမြင့်မားအပူလွန်ကျူး, အနိမ့်အပူခုခံ, ရှည်လျားဝန်ဆောင်မှုအသက်, ခုခံ၏အားသာချက်များရှိပြီးအဆိုပါ LED ကိုလူမီနီယမ် PCB ဘုတ်အဖွဲ့အပူဝိသေသကြောင့်, အအေးလျှောက်လွှာစက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမောင်းထုတ်ရန်ရှိသမျှတို့, LED မီးလူမီနီယမ်ဘုတ်အဖွဲ့မှလူသိများသည်နှင့်အမျှ အဆိုပါတိုးတက်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ, ပစ္စည်းကိရိယာများ, ကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းဆင်ခြင်တုံတရားနှင့် LED စက်မှုလုပ်ငန်း၏လျှောက်လွှာကိုလယ်တိုးချဲ့အတူ။
လက်ရှိတွင်၏ထုတ်ကုန် application ကို LED ကလူမီနီယမ် Printed Circuit ဘုတ်အဖွဲ့ ပြင်ပအလင်းရောင် LED သည့်ထိုကဲ့သို့သောစီးပွားဖြစ်အလင်းရောင်အဖြစ်တပြင်လုံးကိုအလင်းရောင်လျှောက်လွှာစက်မှုလုပ်ငန်း, မိုးလုံလေလုံအလင်းရောင်, ဖုံးလွှမ်း, တစ်ခုလုံး etc.As, LED လူမီနီယံဘုတ်အဖွဲ့ထဲမှာမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကိုဆက်လက်ဦးမည် လာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်။
လူမီနီယံအမြင့်ဆုံးအပူစီးကူးခြင်းနှင့်အပူလွန်ကျူးရှိပါတယ်ကြောင့်, ကထိထိရောက်ရောက်ပြည်တွင်းရေးအပူတင်ပို့နိုင်ပါတယ်။ လူမီနီယမ် PCBကောင်းသောအပူစီးကူး, လျှပ်စစ်လျှပ်ကာနှင့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူထူးခြားတဲ့သတ္တုဝတ်ကြေးနီပန်းကန်ဖြစ်ပါတယ်။
LED ကိုလူမီနီယမ် PCB ၏အင်္ဂါရပ်များ:
1. Surface ကနည်းပညာ (Smt) mount;
ဆားကစ်ဒီဇိုင်းအစီအစဉ်အတွက်အပူပျံ့နှံ့၏ 2. အလွန့်အလွန်ထိရောက်သောကုသမှု;
3. , ထုတ်ကုန်များ၏လည်ပတ်မှုအပူချိန်ကိုလျှော့ချထုတ်ကုန်ပါဝါသိပ်သည်းဆနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရတိုးတက်ကောင်းမွန်လာလျက်, ထုတ်ကုန်၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း;
LED ကိုလူမီနီယမ် PCB ဖွဲ့စည်းပုံ:
လူမီနီယမ် - based ကြေးနီဝတ်ပန်းကန်ကြေးနီသတ္တုပါး၏ရေးစပ်သတ္တုဆားကစ်ဘုတ်ပစ္စည်း, အပူလျှပ်ကာအလွှာနှင့်သတ္တုအလွှာတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါတယ်။ : က၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအလွှာသုံးလွှာသို့ကွဲပြား
Cireuitl.Layer: ကြေးနီ 10oz မှကြေးနီသတ္တုပါးအထူ loz အတူဘုံ PCB နှင့်အတူဝတ်။
DielcctricLayer insulator တွင်လည်း: လျှပ်ကာအလွှာကိုအနိမ့်အပူကူးမှု insulator တွင်လည်းပစ္စည်းအလွှာဖြစ်ပါတယ်။
BaseLayer: သတ္တုအလွှာ, များသောအားဖြင့်လူမီနီယမ်သို့မဟုတ် optional ကို copper.Aluminum - based ကြေးနီဝတ်ပန်းကန်နှင့်အစဉ်အလာ epoxy ဖန်အထည်ဖျင်။
The thermal insulation layer of high performance လူမီနီယမ် PCB uses this technology, which makes it have excellent thermal conductivity and high strength electrical insulation performance.Metal base is aluminum pcb board support components, requires high heat conductivity, generally is aluminum plate, also can use copper (copper plate can provide better thermal conductivity), suitable for drilling, punching and shearing and cutting and other conventional mechanical processing.Compared with other materials, PCB materials have incomparable advantages.Suitable for SMT on the surface of power components.Without radiator, the volume is greatly reduced, heat dissipation is excellent, good insulation and mechanical properties.
ဟုတ်ပါတယ်, တို့ကြောင့်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံ၏လူမီနီယံ pcb စက်မှုလုပ်ငန်းများလျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်, တစ်ဦးပြင်းစွာသောအ competition.Therefore လည်းမရှိ, နည်းပညာဆိုင်ရာဆန်းသစ်တီထွင်မှုဟာထုတ်လုပ်သူစျေးကွက်ဝေစုဖမ်းပြီးဖို့အတှကျအဓိကနည်းလမ်းဖြစ်လာသည်။
"လူမီနီယမ် PCB ဘုတ်အဖွဲ့မှာ Automatic ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း" ဒီနည်းပညာကလူမီနီယမ်ဆားကစ်ဘုတ်၏အလိုအလျှောက်ထုတ်လုပ်မှုသဘောပေါက်, အရည်အသွေးကပိုအာမခံချက်ဖြစ်ပါသည်, စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုလျော့ကျစေပါတယ်, ကုန်ကျစရိတ်လျော့နည်းစေသည်။
ဒီလူမီနီယမ်ထုတ်ကုန်များအတွက်အများအပြားအမည်များရှိပါတယ်; လူမီနီယမ်, လူမီနီယမ်အခြေစိုက်စခန်း, ဝတ် သတ္တု Core PCB , သတ္တုဝတ် Printed Circuit ဘုတ်အဖွဲ့ ( MCPCB စသည်တို့), insulator တွင်လည်းသတ္တုအလွှာ (IMS သို့မဟုတ် IMPCB), အပူကူးမှု PCBs, ဒါပေမဲ့သူတို့ကအားလုံးအတူတူပါပဲဆိုလိုခြင်းနှင့်အတူတူပင်လမ်းဖျော်ဖြေမည်။
KingSong စွမ်းရည်နှင့်အခမဲ့ DFM စစ်ဆေးမှုအပါအဝင်တန်ဖိုးကို-added ရွေးချယ်စရာအောင်ထက်ပိုတစ်ဆယ် years.Our အပြည့်အဝအင်္ဂါရပ်လူမီနီယမ် PCB ပျဉ်ပြားအဘို့အလူမီနီယံ PCB ကုန်ထုတ်န်ဆောင်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ခဲ့သကဲ့သို့သင်တို့အရည်အသွေးမြင့်လူမီနီယံ PCBs သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်အတွင်းပြုရခွင့်ပြုပါ။ ငါတို့အားဖြင့်ပုံနှိပ်လူမီနီယမ် PCBs ကျယ်ပြန့်သည့် LED အလင်းရောင်, ပါဝါပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းစနစ်များအတွက်အသုံးပြုနေကြသည်။